Geosphere: kedu ihe ọ bụ, gịnị bụ ihe mejupụtara ya na etu o si dị mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Wa anyị nwere ihe ndị nwere ndụ na ndị na-enweghị ndụ. Anyị nwere ike ịtụgharị uche n'ọtụtụ ala ugwu, oke ọhịa, oke osimiri na oke osimiri, wdg. Okirikiri ala ndị a niile nwere akụkụ nke ihe arụ na ndị ọzọ nwere ndụ. Nnukwu mbara ụwa abụghị ihe anyị na-ahụ site na mbara ala, ọ bụ ezie na ọ dị anyị ka ọ bụ ụzọ ahụ. Planetwa anyị n'ime nwere ọtụtụ ihe nwere njirimara dị iche iche. The set nke ndị a niile ọcha na-adịghị ndụ a maara dị ka geosphere.
N’isiokwu a anyị ga-ekwu okwu miri emi banyere mbara ala. Can nwere ike ịmụta ihe ọ bụ, ihe mejupụtara ya, mkpa ọ dị na njirimara ya niile.
1 Gịnị bụ geosphere
3 Uwe mkpuchi
4 Njirimara nke jikọrọ ọnụ
Gịnị bụ geosphere
Geosphere bụ aha enyere akụkụ ụwa niile, site n’elu ụwa ruo na ime. Nke ahụ bụ, agbanyeghị na ikuku bụkwa akụkụ nke ụwa anyị, ọ ga-anọ n’èzí. Iji nye anyị otu echiche, geosphere ekewa ụzọ atọ: jikọrọ ọnụ, uwe mgbokwasị na isi. A maara akụkụ ndị a dị ka akwa ụwa.
Ngwurugwu ọ bụla ma ọ bụ akụkụ nke geosphere nwere nkewa nkewa dabere na ngwakọta nke ihe ndị ahụ, nhazi na nhazi ha. Mmalite nke nhazi ọ bụla dị na ọdịdị nke ihe ndị na-eme ka mepụta ụwa. Anyị na-echeta na, na mmalite nke nguzobe nke ụwa, ọ bụ ihe ọ bụla karịa ihe na-adịghị mma nke ihe e guzobere site na njikọ nke uzuzu na ihe oghere. Ihe a jiri nwayọ nwayọ ma were ọdịdị nke ụwa ọ nwere taa.
N'ihi mmetụta nke ike ndọda, a na-etinye ihe dị arọ karị na ntọala ahụ, ebe ọkwa ndị na-adịchaghị nrịgo gbagoro n'elu. N'ihi nke a, jikọrọ ọnụ ahụ dị jụụ tupu ọ pụọ n'èzí ma isi ya ka na-agbaze. Na mgbakwunye, na ala nke etinyere oké osimiri na oke osimiri, ekwere ka ikuku na ndụ dịrị.
Akụkụ ọ bụla nke geosphere nwere njirimara pụrụ iche na ọ bụ ihe eme ka ha pụọ ​​iche ma atụnyere ụwa ndị ọzọ. Anyị ga-ahụ otu otu.
Dị ka anyị maara, ndị ụwa isi ọ bụ ya kachasị mie emie. Ọ dị na etiti okirikiri. Mgbe anyị na-ekwu maka ntọala ahụ, anyị ga-amarịrị na e kewara ya ụzọ abụọ: ime na mpụta. Nkewa a bụ n'ihi ọnọdụ nke ihe eji eme ya na ụdị ihe eji eme ya. Isi dị n’ime ya bụ akụkụ siri ike ma bụrụ ebe kachasị sie ike n’ụwa. Ihe mere o ji sie ike ma ghara ịgbaze n'agbanyeghị oke okpomọkụ Ọ bụ n'ihi njupụta na nrụgide nke e doro ihe ahụ.
Ihe ndị mejuputara nucleus bụ iron, nickel, uranium na ọla edo yana ihe ndị ọzọ. Ihe ndị a emeela ka ọ bụrụ isi nke ụwa n'ihi njupụta ha. N'ịbụ nke dị oke karịa ihe ndị ọzọ, ike ndọda dọtara ya ruo mgbe ọ gwụchara n'ime ebe kachasị mie emi. Fọdụ ihe ọkụ na-ejedebe na ala, ebe ọ bụ na a rapara ha na ndị dị arọ. Nke a bụ ihe kpatara enwere ike ịchọta ihe ndị dị ala na isi ma ọ bụ akwa miri emi.
Ugbu a, anyị na-aga n'ihu na akwa oyi akwa. Dị ka isi ụwa, a na-ekeji uwe ahụ n'ime na mpụga. N'okwu a anyị na-ekwu maka udidi mmiri mmiri. Karịsịa, a na-eji uwe agha ahụ emee uwe ahụ nke na-ebili n'elu n'ihi ekele mgbawa na na, mgbe ọ metụtara ikuku, a na-akpọ ya lava.
Uwe mgbokwasị nwere ọtụtụ ngwakọta nke ihe karịa isi. Anyị nwere ike ịchọta ma ihe dị arọ ma dị mfe. N'ịbụ akụkụ mmiri mmiri, ọ na-aga n'ihu na-aga n'ihu n'ihi ịdị adị nke usoro ntụgharị nke na-eme n'ihi ọdịiche dị na njupụta n'etiti ihe ndị mejupụtara ya. N'ihi ya, e nwere ije nke kọntinent si efere tectonics.
Njirimara nke jikọrọ ọnụ
Ihe jikọrọ ọnụ bụ akụkụ siri ike nke mputa nke mbara ụwa. Ọ dịbeghị otú a. Mgbe ole kere ụwa, eriri ahụ nke ji mmiri mmiri jiri nwayọọ nwayọọ belata. Ọ ka na-eme ya ruo taa. Ka ọ na-ajụtụ nke nta nke nta, okpomọkụ ahụ na-achụsasị n'èzí mbara ala, ya mere, oyi ndị dị n'elu na-ajụ oyi. Nke a rụpụtara ka mmiri dị jụụ na-esiwanye ike n’elu mmiri ọzọ. Ọ bụ n'ihi eziokwu ahụ na eriri ahụ emeela ka ọ sie ike ma mee ka ọ dị mma na ụwa anyị nwere ike ịchekwa okpomọkụ karị.
Ala ahụ bụ oyi akwa nke ụwa ebe nnukwu ọkụ ọkụ na-agbakọ. Mgbe a na-akpọ otu akụkụ nke ọdịdị ala geosphere, anyị na-ezo aka na ihe ndị dị na mbara ala nke na-eme ya. Dịka ọmụmaatụ, mineral na okwute, ugwu, ugwu nta, ụzọ ụkwụ, wdg. Naanị ihe mejupụtara ihe ndị a bụ geosphere.
Anyị nwere ike ịchọta ihe ndị dị arọ dị ka iron, lead, uranium na ọlaedo, ọ bụ ezie na ọ na-esiri ha ike ịchọta maka ihe ndị anyị kwurula na mbụ. Ihe ndị a dị arọ ma dị n'elu maka ohere dị iche iche. Otu n’ime ha bụ nke ahụ nọgidere na-adị n'elu ụwa mgbe ọdịiche ndị ọzọ dị iche. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na, dịka e si ekpochapụ ụfọdụ ihe ọkụ na ndị ahụ buru ibu, ihe megidere ya gaara eme ebe a. Ọ bụ ndị na-adịchaghị okirikiri buru ihe ndị buru ibu. Nhọrọ ọzọ bụ na ha bịara na mbara ụwa anyị mgbe eriri ahụ siri ike site na meteorites na asteroids. Mgbe ha kụrụ ala siri ike, ha nọrọ ebe a ọ bụghị n'ime.
Enwere m olileanya na ozi a na-enyere gị aka ịmatakwu banyere geosphere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » geosphere